Mbola tia antsika ve Andriamanitra? - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-04 > Mbola tia antsika ve Andriamanitra?
Ny ankamaroantsika dia efa namaky Baiboly nandritra ny taona maro. Tsara ny mamaky ireo andinin-tsoratra masina mahazatra ary aforeto ao toy ny lamba firakotra mafana izy ireo. Mety hitranga ny antony mahatonga antsika tsy hahafantatra ireo antsipiriany lehibe. Raha mamaky azy ireo amin'ny masontsika sy amin'ny fomba fijery vaovao isika, ny Fanahy Masina dia afaka manampy antsika hahita bebe kokoa ary mety hampahatsiahy antsika ireo zavatra hadinontsika.
Rehefa namaky ny bokin’ny Asan’ny Apostoly indray aho, dia nahita andalan-teny iray izay mety ho novakinareo nefa tsy noraharahainareo firy: “Ary niaritra izany nandritra ny efa-polo taona tany an-tany efitra Izy” (Asan’ny Apostoly 1.3,18 1984). Efa nandre an’io andalan-teny io tao an-tsaiko aho ary nandre fa Andriamanitra dia tsy maintsy niaritra ny fitarainana sy ny fitomaniana ny Isiraelita toy ny hoe enta-mavesatra ho azy ireo.
Namaky an’ilay andinin-teny anefa aho avy eo: “Ary ianao koa dia efa nahita ny nanampian’i Jehovah Andriamanitrao anao tamin’ny lalana tany an-tany efitra. Hatreto dia nitrotro anao tahaka ny ray ny zanany izy »(5. Mosesy 1,31 Fanantenana ho an'ny rehetra).
Hoy ny Baibolin’i Lotera vaovao tamin’ny taona 2017: “Ary nentiny tany an’efitra efa-polo taona izy” (Asan’ny Apostoly 1.3,18) na araka ny fanazavan’ny MacDonald Commentary hoe: “Manomeza izay ilain’ny olona iray”. Azo antoka fa nanao izany ho an’ny Isiraelita Andriamanitra, na dia teo aza ny fimonomononana rehetra.
Nisy jiro niseho tamiko. Mazava ho azy fa nikarakara azy ireo izy; nanana sakafo, rano sy kiraro tsy lany andro izy ireo. Na dia fantatro aza fa tsy ho noana Andriamanitra, tsy tsapako mihitsy fa akaiky sy lalina ny fiainany izy. Nampahery tokoa ny namaky fa nitondran'Andriamanitra ny olony toy ny itondran'ny ray ny zanany lahy.
Indraindray isika dia mahatsapa fa sahirana Andriamanitra mitondra antsika na marary amin'ny fiatrehana ireo olantsika sy ireo olana lalovantsika ankehitriny. Ny vavaka ataontsika dia toa tsy miova hatrany ary miverimberina foana amin'ny fahotana efa mahazatra antsika. Na dia mikorontana aza isika indraindray ary manao toy ny Isiraelita tsy mahay mankasitraka, Andriamanitra dia mikarakara antsika na be taraina aza isika; etsy ankilany, azoko antoka fa aleony misaotra azy toy izay mitaraina isika.
Ny kristiana amin'ny fanompoana manontolo andro, fa ny Kristiana rehetra manompo sy manohana olona amin'ny lafiny sasany, dia mety ho reraka sy ho may. Amin'ity toe-javatra ity dia manomboka mihevitra ny iray tam-po aminy ho toy ny Isiraelita tsy zaka izy, izay mety hitarika ny olona iray hametraka ny olany "mahasosotra" ho an'ny tenany. Ny hoe miaritra zavatra dia midika hoe mandefitra amin'ny zavatra tsy tianao na manaiky zavatra ratsy. Andriamanitra tsy mahita antsika tahak'izany! Zanany daholo isika ary mila fikarakarana feno fanajana, fangorahana ary fitiavana. Amin'ny fitiavany izay mikoriana ao amintsika dia afaka mitia ny mpiara-belona amintsika isika fa tsy miaritra azy ireo fotsiny. Raha ilaina dia afaka mitondra olona isika raha tsy ampy intsony ny herin'izy ireo eny an-dalana.
Avelao hampahatsiahy anao fa Andriamanitra dia tsy nikarakara ny olony tany an'efitra fotsiny, fa mitazona anao manokana koa amin'ny tanany be fitiavana. Mitondra anao hatrany hatrany Izy ary tsy mitsahatra ny mitia sy mikarakara anao, na dia mimenomenona aza ianao ka manadino ny mankasitraka. Ny fitiavan'Andriamanitra tsy misy fetra dia manodidina anao mandritra ny fiainanao, na fantatrao izany na tsia.